IHE NA-EME! IMAKWA NA NWAGBỌGỌBỊA BỤ NWOKE!!! – hoo!haa!!
Ị lee ‘nwagbọgọbịaa’ anya, ị gaghị ekwere na ọbụ nwikorọbịa?
Ogunleye Idris dị afọ iri na itolu. Ihe ọ na-arụ bụ ike ekike dika nwanyị ma bia kwụrụ n’agịga ụzọ maka ịnara ụmụ nwoke ego.
Idris gụchara akwụkwọ nke sekọndrị n’ụlọ akwụkwọ amara aha ya bụ Kings College na Legọs, n’afọ gara aga. Ọbụ n’ụbọchị ụka gara aga ka aka kpara ezekwu-udele maka ikwu onye chiri ya ọzọ.
Ọbụ na otụ ụlọ ọriri na ọñụñụ ka Idris nọ mgbe otu nwikorọbịa kpọ ụmụ agbọgọbịa nabọ ọzọ bata ma hụ Idris. N’uche nwokea, ọ hụla ọfe ka nke ọkwụrụ ụtọ.
Mkpu kpọrọ mgbe nwokea chọrọ ka- obie ya aka n’araa nakwa akụkụ ahụ ya ndi ọzọ, ọbụ n’ogea ka ngwugwu mmiri ‘pure water’ Idris ji mere araa ya dapụtara. N’ebeazị ka ikuku nọrọ kue, ewere hụ ike ọkụkọ.
Mgbe ndi uwe ojii gbara ya ajụjụ ọnụ, Idris sịrị na ya na-eme nkea iji were nweta ego ya chọrọ maka agụm akwụkwọ dị ya n’ihu. Ọbụ na steeti Ogun ka-amụrụ Idris.
Ọ sịrị na mgbe ya gụchara akwụkwọ nke sekọndrị na nna ya gwara ya hoohaa, na ya enweghị ego ya ga-eji zụrụ ya n’akwụkwọ gaba. Ọ sịkwara na ya chọpụtara na ụmụ nwoke anaghị enyere ụm nwoke ibe ha aka. Ọ gara n’ihu kwue na ọbụ nkea mere ya jiri kwue n’uche, na ihe amaghị ka-esi eme na ka esi eme ya dị. Ya ka ya jiri ghọọ nwanyị nke mberede.
Idris sị n’agbanyeghị na ya na-adị ka nwanyị mana ya na ụmụ nwoke anaghị akwa iko. Ọ sịrị na ya natachaa nwoke ego, gwusogide ya egwu rue mgbe aga-atọ agbụ ekere nwa ngwere, ya ewere nwayọọ sị ka ya bịakwa ma si ebe ahụ larie.
Mgbe ajụrụ ya ka o si enweta ụmụ nwoke, ọ sịrị na ya na-eji ekwe ntị akpọ akara ndi mmadụ, ọ bụrụ na onye ya kpọrọ gosiri mmasị, ya agwa ya ebe ya ga-anọ chere ya. Ọ sịrị na ya na-enweta ndi ụfọdụ ya kpọrọ ebe ndi ọzọ anaghị ekwe abịa. Idris sị na ya esila n’aka ọrụ ya nwete ego dị puku naira iri abụọ ya jigoro gbaa akwụkwọ ule ibanye mahadum.
Mgbe ajụrụ ya ma nne na nna ya mara ụdị agwaa ọ na-akpa, Idris sị mba maka na ya anaghị eje ọrụ n’ebe dị ụlọ ha nso.
Mgbe ajụrụ ya ka o si akwado onwe ya tupu o bido ọrụ, ọ sịrị na ya na egoro ngwugwu miri tinye n’apata ya nakwa obi ya ka ya were yie ụmụ agbọgọbịa. Ọ sịrị na ya na-ejewe ka ọbọgwụ n’ihi na ya ji anya ya-ahụ ka ụmụ nwanyị si eje. Ọ sịrị na ya na-eweputa oge mụọ iga ije dịka ụmụ nwanyị. Ọ sịrị n’ọbụ n’ime afọa ka ya malitere ụdị akparama agwaa ma kwukwa na ya bu n’obi ịkwụsị ya na ngwụchaa afọa.
Onye osote onye ji ọkwa mmekọrita ndi uwe ojii na ndi ohaneze steeti lagọs bụ Mazị Adesanya Jinadu kwuru na-aga-akpụpụ Idris ụlọ ikpe mgbe na-adịghị anya ma dọkwa ụmụ nwoke aka na ntị ka ha kpachara anya maka ndi ọzọ dịka Idris n’ihi n’ọbụ onye oshimiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri.
Previous Post: ỌNWỤ IKE!
Next Post: BUHARI EKWUELA IHE EJIRI GBUE NDI ỤKỌCHUKWU NA STEETI BENUE ỤNYAHỤ